तीन दिनमा कति कमायो ‘क्याप्टेन’ ले ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
तीन दिनमा कति कमायो ‘क्याप्टेन’ ले ?
निर्देशक दीवाकर भट्टराई निर्देशित तथा सुपरस्टार अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र ‘क्याप्टेन’ ले प्रदर्शनको तीन दिनमा आक्रामक कमाई गर्न सफल भएको छ । वितरक मनोज राठीले चलचित्रको विकेन्ड कलेक्सन सार्वजनिक गरेका छन् । चलचित्रले तीन दिनमा २ करोड ४० लाख कमाई गरेको उनले बताए । उनका अनुसार, यो कलेक्सन यस वर्षको ‘छक्का पञ्जा ३’ पछिकै सर्वाधिक हो ।
देशैभर पहिलो दिन ६५ लाख कमाएको चलचित्र ‘क्याप्टेन’ ले दोस्रो दिन (शनिबार) पहिलो दिनको तुलनामा दोब्बर कलेक्सन गरेको छ । शनिबार चलचित्रले १ करोड २५ लाख छापेको छ भने तेस्रो दिन (आइतबार) ५० लाखको व्यापार गरेको राठीले बताए । सोमवार पनि चलचित्रले करोडको आसपास कमाई गर्ने उनको अनुमान छ । चलचित्रको व्यापार उपत्यका र मोफसल दुबैतिर राम्रो रहेको उनी बताउँछन् ।
चलचित्रको विकेन्ड कलेक्सन राम्रो हुनुमा अनमोलको क्रेज, गीतसंगीत र ट्रेलरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका राठीको भनाइ छ । फिल्म १ करोड ८० लाखमा हलमै पुगेको हो । चलचित्रले नेपालबाट ६ करोड ग्रस व्यापार गरे निर्माताको लगानी उठ्छ । ‘वर्ड अफ माउथ’ राम्रो भएका कारण चलचित्र लामो रेसको घोडा बन्ने वितरक राठीको विश्वास छ । उनले सोमवार पनि चलचित्रको व्यापार शनिबारको नजिक हुने बताए ।
उनले भने- ‘शिवरात्रीको सार्वजनिक विदाको फाइदा चलचित्रले राम्रो उठाएको छ । बिहानको सो अपेक्षाकृत नभए पनि दिउँसो १२ बजेबाट चलचित्रले देशभर हाउसफुल व्यापार गरेको छ । उपत्यका भित्र र बाहिरका अधिकांश सिंगल थिएटर र मल्टिप्लेक्सहरु भरिभराउ छन् ।’ उनी ६ महिनापछि हलमा मेला लागेको बताउँछन् । यो चलचित्र समीक्षकको नजरमा भने खरो उत्रन सकेको छैन ।
पिताको फुटबलमा देशलाई गोल्ड मेडल जिताउने सपना पूरा गर्ने एक छोराको संघर्षको पेरिफेरीमा चलचित्र घुमेको छ । अनमोल फुटबल खेलाडी इशानको भूमिकामा छन् । उनको अपोजिटमा उपासना सिंह ठकुरी र प्रियंका एमभी छन् । भने, सरोज खनाल, प्रशान्त ताम्राकार, विल्सन विक्रम राई, सुनिल थापालगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । यसलाई भुवन केसीले बनाएका हुन् ।